သပြုသီး ဆိုတာ ဒီလို အသီးကွဲ့| Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » သပြုသီး ဆိုတာ ဒီလို အသီးကွဲ့ 
သပြုသီး ဆိုတာ ဒီလို အသီးကွဲ့ 
Posted by nigimi77 on Oct 9, 2012 in Food, Drink & Recipes | 34 comments
Candle ရေးသားတဲ့ ” သပြုသီးအတွက်..ဟင်းတစ်ခွက် ” ဆိုတဲ့ ပိုစ့် အတွက်
သပြုသီး မမြင်ဖူးဘူး ဆိုတဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ အတွက် ဓါတ်ပုံတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
ရခိုင်မှာနေတုန်း က အမုန်းသောက်ခဲ့ ရတဲ့ သပြုသီး ချဉ်ရည် လေး သောက်ချင်လာပြီ။ အဲဒီ အသီး က ရခိုင်မှာ ပေါသလောက် ရန်ကုန်မှာ မတွေ့ ဖူးဘူး။ ဒီမှာတော့ ကုလား ဆိုင်တွေ မှာတွေ့ မိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ဈေးတိုင်း မှာ မရတဲ့ ရခိုင်မှာပဲ စ စားဖူးတဲ့ အသီး တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ ဟင်းခပေါက်သီးလည်း ဒီမှာ ရှိတယ်။
သပြုသီး ရန်ကုန်မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ် .. လှည်းတန်းဈေးက ရခိုင်ဆိုင်မှာ ရခိုင်ဒေသထွက်အသီးအနှံ အစုံရောင်းတယ် … ဈေးတော့ ကြီးတယ် … ဟင်းခပေါက်သီးလေးတွေလဲ ရှိတယ် …
သပြုသီးကို ကြက်သားနဲ့ အရည်သောက်လေးချက်စား တအားကောင်း… :hee:
အေး နင်တက်တူးမထိုးတော့ရင် ချက်ကျွေးမယ်…
မွန်ပြည်နယ်မှာလဲ ပေါပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီသပြုသီးကတော်တော်နွမ်း
ဟုတ်တယ် မေဖလားဝါးရေ ။ ဟင်းချက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ၀ယ်ခိုင်းထားတာ
၀ယ်လာတဲ့ နေ့ မှာပဲ ကျုပ်က ခရီးထွက်သွားလို့အခုလို နွမ်းဖတ်နေမှ ရိုက်ရတာ
ကျုပ်ကရခိုင်စာလည်းကြိုက် ရခိုင်အိမ်တွေမှာစားနေကြဆိုတော့ ဒီဟင်းချိုကိုအတော်
လေးသဘောကျတာ ။ သူ့ ရဲ့ အချဉ်ဓတ်က ကြည်ကြည်လေး ။ ရန်ကုန်မှာတော့ 
စမ်းချောင်းဂွဈေးမှာဝယ်လို့ ရမယ်ထင်တယ်။ ဒါနဲ့  ကိုရင်နိဂိမိရေ
အဆင်ပြေရင် ဇင်ပြွန်းသီးကိုချက်တဲ့  အကြောင်းလေးလုပ်ပါဦး ။ ကြားသာကြားဖူးပြီး
မစားဖူးသေးဘူးဗျ။ နောက်ပြီးရန်ကုန်မှာ ရနိုင်လားလို့ ပေါ့ ။ဒီက ရခိုင်ဆိုင်တွေမှာတော့ 
မတွေ့ ဖူးသေးဘူး ။
တပြုသီးကြီးကမီးကင်ထားတာလား? ဒီမှာတော့စိမ်းစိမ်းလတ်လတ်လေးတွေတွေ့လို့.. ဘဲဥဟင်းကလည်းဆီများလိုက်တာ. ရခိုင်တွေကဆီစားနည်းတယ်ပြောကြတယ်. :question:
သပြုသီးက Expired Date ဖြစ်သွားတာအေ့
၀ယ်ထားတာကြာပြီ ဒီနေ့ မှ ဓါတ်ပုံရိုက်ရလို့ 
အဲဒီဆိုင်က ရခိုင်မက ဖွင့်ထားတာပဲ
ဗမာတွေ များလို့ လားတော့မသိဘူး ဆီကို မတရားသုံးတယ်
ဒီမှာက ခေါင်တော့ ရွေးချယ်စရာ သိပ်မရှိဘူးလေ
ကျောက်ဖြူမြို့ ထဲသွားရင်တော့ ဆီမပါတဲ့ ရခိုင်ဟင်းကောင်းကောင်းစားရတာပေါ့
သပြုသီးဆိုတာ ရခိုင်စာချည်းမဟုတ်ပါဘူး … မွန်တွေလည်းချက်စားကြပါတယ် …. သိပ်အရှားကြီးမဟုတ်ပါဘူး … ရန်ကုန်က လူတွေက သိပ်မစားဖူးတော့ အဲဒီအသီးကို သတိမထားမိတာလည်း ပါပါမယ် … သပြုသီးကို ငါးကိုကင်ထားတာလေးနဲ့ ချက်စားရင်တစ်အားမွှေးတာ …
ကိုစာမိပြောတဲ့ ဇင်ပြွန်းသီး ဆိုတာလည်း မွန်စာပါပဲ .. အမေဆို မော်လမြိုင်ကပြန်လာရင် အဲဒီအသီးလေးတွေ ၀ယ်လာတတ်တယ် … သူ့အသီးလေးက သဖန်းသီးလောက်ပဲရှိတယ် … ပါးပါးလှီးပြီး ဟင်းချိုချက်သောက်ရတာပဲ ….
တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။ ခုမှပဲမြင်ဖူးတော့တယ် ချက်စားရင် ချဉ်ဖန်လေးလားရှင်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ ပိုစ့်မှာ သွားပြန်ဖတ်ကြည့်ဦးမှပဲ။
ဟုတ်ပါ့တော် ကျုပ်လည်းခုမှ သဒိထားမိဒယ်
နှုတ်ကျိုးနေတာက ဇမြွန်းသီး ဆိုပြီတော့ပါ ဇင်ပြွန်းသီး ဆိုပြီးခုမှသိဒယ် သိုင်းကျူး
ဇင်ပြွန်းသီး ဆိုတာက သဗြုသီးနဲ့ပုံစံခပ်ဆင်ဆင်ဘဲဗျ သူကအလုံးသေးတယ်
တစ်ခုက ဇင်ပြွန်းသီး က နွေရာသီမှာသီးတယ် အပင်ကတော့ အပင်ကြီးမျိုးဆိုပေမယ့်
ပင်စည်လုံးပတ်နှစ်ပေလောက်ဆိုသီးပြီ နောက်တစ်ခုက သူကအများအားဖြင့်
မရတာလည်းကောင်းတာဘဲ မဟုတ်ရင် ဇင်ပြွန်းသီးစာခြင်ရင်
ရွာမှာဆို အပင်ပေါက်တွေကို ခြံစည်းရိုးလုပ်ထားလိုက်ရင် ကြီးလာရင်စားလို့ရသပေါ့
အပင်မကြီးစေခြင်ရင် ထွက်လာတဲ့ အကိုင်းတွေကို ချိုးလိုက်ရတယ်
သူ့ဖာသာမျိုးစိတ်ဘယ်လောက်ကွဲတယ်ဆိုတာကတော့ ကျုပ်က ခြောက်တန်းကျော်ကျော်လေးဘဲ
တစ်ခုရှိတာ အဲ့သည်အပင်တွေမှာ အချို့က အရွက်တော်တော်ကြီးတယ်
အင်ဖက်ရှားတဲ့ဒေသတွေမှာဆို အဲ့သည် ဇင်ပြွန်းရွက်ကို အိမ်မိုးဖက်အဖြစ်သုံးကြတယ်
ဒါပေမယ့်သူက အင်ဖက်လောက်မထူတော့ တစ်မိုးတော့ရသပေါ့
ခုတော့လည်း အချို့ရေလာတဲ့သူတွေက အိမကိုသွပ်မိုးကုန်ပြီပေါ့
အချို့ကတော့ အိမ်မိုးဖို့အတွက် အတော်ခေါင်းစားရရှာတယ်
( ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ အိမ်အမိုးအဖြစ်သုံးနေကြတာကျုပ်သိသလောက်က သက်ကယ် လားသက်ငယ်လား
ဓနိ အင်ဖက် တောင်ထန်းရွက် စသည်တွေပေါ့ )
( အိမ်ကို ပြောခဲ့ပြီးသလို တောထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ မိုးထားတော့ နေပူရင် အမိုးတွေက ကော့လန်ပြီးနေမယ်
ရုတ်တရက်များမိုးရွာလို့ကတော့ အရွက်တွေက ချက်ခြင်းမပြန့်လို့ မိုးရိုတဲ့အခါ ရှိသမျှခွက်တွေနဲ့
လိုက်ခံထားရတာကလည်း စိတ်ပျက်စရာလည်းကောင်း ရီစရာလည်းကောင်းပေါ့
ဇင်ပြွန်းသီး ဘရပ်စာ ဟင်းချိုရွက် ကင်ပွန်းရွက် ဒါတွေကတော့ ရောချက်ကြတဲ့
စားဖူးတယ် ထင်တာပဲ..လုံမလေးက ရခိုင်စာတွေ ကြိုက်တယ်…
ဒီနေ့တောင် ငါးကြင်းကို ရခိုင်ချက် ချက်စားသေးတယ်.. :harr:
လုံမလေး မွန်မွန်က ရခိုင်စာပဲ ကြိုက်သလား ရခိုင်သားလေးကိုရော မကြိုက်ဘူးလား
ကျုပ်တော့ ရခိုင်စာလည်း ကြိုက် ရခိုင်မလေးတွေကို လည်း …အာဟိ
ပြောပါဝူး…ဘာလို့ ပြောရမှာလဲ… ဟိဟိ (အထင်ကြီးအောင် လျှောက်ပြောတာ)..
သပြုသီးကို ကြက်သား၊ ငါးရိုး၊ငါးခေါင်း (ငါးအကောင်ကြီးတွေရဲ့ ကင်ထားတဲ့အရိုး။ အရိုးဆိုပေမဲ့ အသားတွေတော်တော်များများပါပါသေးတယ်) အဲ့ဒါနဲ့ဟင်းရေသောက်ချက်လိုက်လို့ကတော့ ချည်ဖန် လေးနဲ့ အတော့ကိုသောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ကြာကြာအထားခံတဲ့အသီးပါ။ မစားရတာကြာပြီဗျာ။
အခုပုံကပြထားတဲ့အသီးကတော့ သိပ်မလတ်တော့ဘူး။ nigimi77 တစ်ယောက် သူအမေ လွင့်ပစ်ဖို့ထားတာကို ကောက်ပြီးရိုက်လိုက်တယ်နဲ့တူတယ် :-)
အဲဒီ အသီးက တော်တော်ကြာရှည်ခံပါတယ်
၀ယ်ထားပြီး ခရီးထွက်နေလို့ဒီနေ့ မှ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာပါ
၁၅ ရက်ရှိသွားပြီ အဲဒီ အသီးက
သောက်ဆမ်းကိုတော့ တနင်္ဂနွေနေ့ တိုင်း ကြက်အရှင်ကို ၀ယ်ပြီး
ကိုယ်တိုင် သတ်စား….ချက်စားပါတယ် marblecommet ရေ
ပြီးရင်တော့ မူးမူးနဲ့မင်းပြင် ကမ်းခြေသွားရင်သွား မသွားရင်တော့
ကျောက်ဖြူက ကမ်းခြေဘေးက နဂါး နှစ်ကောင်မှာ ပင်လယ်လေရှုပြီး
သပြုသီးကတော့ နုစဉ်ကနေ ရင့်တဲ့အထိ
နုတုံးက ငြုတ်သီးစပ်စပ်နဲ့ ဆီပြန် ငြုတ်ချက်လေး
သပြုသီးဟင်းကို.. ကောင်းကောင်းစားဖူးတယ်..။ ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ်..
“သပြုသီးအတွက်..ဟင်းတစ်ခွက်”( Posted by candle) ဆိုတဲ့.. ပို့စ်လင်ခ့်ကလေး.. အောက်မှာ…
ရွာထဲက ကိုကိုကာလသားတွေ အတွက် သားရည်စာ ဖြစ်စေမည့်
ရခိုင်တပြည်လုံးမှာ ကျောက်ဖြူမြို့တမြို့ ထဲမှာပဲ ရှိတဲ့
ရခိုင်တပြည်လုံးက အချောအလှ ဆရာမလေးတွေ စုဝေးရာဖြစ်တဲ့
ပညာရေး ကောလိပ် (T.T.C) အကြောင်းကို ဓါတ်ပုံ ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ 
သပြုသီးဆိုလို့ Deputy ကို သပြုသီးဆိုပြီး ခေါ်ခဲ့တာလေးကို သတိရမိသကိုးဗျ…
သို့သော် သပြုသီးကို ခင်ဗျားပြမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ်ဗျာ…
ချက်ရင် ချဉ်စော်ကားသီဟင်းရည်လို အရသာရှိမယ်ထင်တယ်နော်…
ဇင်ပြွန်းသီး ဆိုတာတော့ ခုမှကြားဖူးတာ…
ရခိုင် ကြက်သောက်ဆမ်းတော့ ကြိုက်တယ်…
တို့ကတော့ သပြုသီးကို သိပ်ကြိုက်တယ်..။ ချဉ်ပြုံးပြုံးလေနဲ..။ ပြောရင်းတောင် သရည်ယိုလာပြီ.. ရှလွတ်
candle တင်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ သပြုသီးဓာတ်ပုံလေးကို..
nigimi77 ကတင်ပေးလို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်..
ချဉ်ပြုံးပြုံး ဖန်တွတွလေးနဲ့ခံတွင်းရှင်းလှတဲ့ သပြုသီးဟင်းလေးကို..
candle ကိုယ်တိုင် ရွာလေးထဲက အကို . အမ တွေကိုချက်ကျွေးချင်လိုက်တာနော်..
သပြုသီး ဆိုဒါဂျီးကို မြင်ဖူးတွားဘီ ..
စားဒေါ့ စားဖူးဘူး …
စားဖူးတယ် ရှိအောင်တော့ ရှာပြီး စားထားဦးမှ …
ခုတော့ မြင်ဖူးသွားပြီ ။ စားတော့ မစားဖူးသေးဘူး။ နောက်ကြုံရင် မြည်းကြည့်ပါအုန်းမယ်။
မင်္ဂလာဆောင်ပါ။ (မှားလို့ – မင်္ဂလာပါ)
သပြုသီး ဆိုတာကို တစ်ခါမှမမြင်ဘူး။ စားလဲမစားဘူးပါ။
မင်းပြထားတဲ့ စားပွဲပေါ်က ဟင်းတွေ က ဟိတ်ဟန်မရှိရှာပေမဲ့ စားလို့ အတော်မြိန်မဲ့ ပုံဘဲ။
စားပွဲအောက်မှာ ခွေးလေးတစ်ကောင် ကလဲ အိပ်နေသေးသကိုး။
ရွာမှာ အများကြည့်ချင်နေတာကို သတိတရ မျှပေးလို့ သင်းခရူး ကြီးပါ။ :hee:
ငယ်ငယ်က မွန်ပြည်နယ်က အဖိုး၊အဖွားတွေ အိမ်မှာ အဲဒီအပင်ကြီးရှိတယ်။ အပင်ကြီးမျိုးပါ..မနက်
မနက်ဆိုကြွေလိုက်တာမှအရမ်း ၊အဲလိုကြွေကျတဲ့ အသီးတောင်စိမ်းပြီးလတ်နေတာပါပဲ… အရင်ကတော့
ခဏခဏစားရလွန်းတော့ အဲဒီအသီးကိုချက်တဲ့နေ့ဆို ဒီနေ့တွတ်ပီကံမကောင်းတဲ့နေ့လို့ သတ်မှတ်ထား
တာပေါ့………….. အလကားရတိုင်းရက်ခြားချက်နေတာ အနဲလေးဟင်းမချက်တောင် ရေနွေးဖြောပြီး
တို့စရာအဖြစ်ပါတာပဲ……ခုတော့ မစားရတာကြာတော့လည်း ပြန်လွမ်းသား :saut:
Item Name : Elephant Apple (သပြု)
Species Family : Dilleniaceae
Found In : အောက်မြန်မာပြည် တောတောင် များ အထူးသဖြင့် ချောင်း မြောင်းများ ၌ ပေါက်ရောက် သည်။
Appearance : အပင်
အမြဲ စိမ်းလန်း ၍ ပင်စည် ဖြောင့်မတ်သော သစ်မာပင် ကြီး မျိုး ဖြစ်သည်။ အမြင့်ပေ ၅၀ အထိရှိ သည်။ အခေါက် ချောသည်။ သပြေနု ရောင်ရှိသည်။ အကိုင်း ဖြာသည်။ အကိုင်း အခက် များ သာမက ရွက်ညှာနှင့် ရွက်ကြော ရိုး များပါ အမွေး နု လေးများ နှင့် ဖုံးအုပ် နေသည်။ အဖိုပင် အမပင် နှစ်မျိုး ရှိ၏။
ရွက်လွှဲ ထွက်သည်။ကျယ်ပြန့် သော လှံစွပ် ပုံရှိသည်။ အလျား ၁ ပေခန့် ရှည် ၊ ထိပ်ပိုင်း ကျယ်၍ ရွက်ရင်း သွယ်ပြီး ရွက်ထိပ် ချွန်သည်။ ရွက်ညှာ ရှည်သည်။ ရွက်ကြော များ အလွန်ထင်ရှား သဖြင့် အရွက် အပေါ်မျက်နှာ ပြင် အမြှောင်း လိုက် ဖောင်းကြွ နေသည်။ အပေါ် မျက်နှာ ပြင်ချော ၍ အောက်မျက်နှာ ပြင် ကြမ်းသည်။ ရွက်နား ပတ်လည် အလွန် ထင်ရှားသော လွှသွား ပုံရှိသည်။
အလွန် ကြီးသည်။ အဖြူရောင် ဖြစ်သည်။ ပွင့်ချပ် စိမ်းဝါ ရောင်ရှိ၍ အပွင့် ဘဲဥ ပုံ ဆန်ဆန် ဖြစ်သည်။ အကိုင်း အခက် အဖျား တွင် တစ်ပွင့်တည်း ပွင့်သည်။ အနံ့မွှေးသည်။ ၀ါဆို၊ ၀ါခေါင် တွင် ပွင့်သည်။
ကြီး၍ မာသည်။ ရှောက်သီး လုံးခန့် ရှိသည်။ အပေါ်ဘက် တွင် ဂေါ်ဖီ ထုပ်ကဲ့သို့ ပွင့်ဖတ်များ အထပ်ထပ် ဖုံးအုပ် နေသည်။အပြင် ခွံ မာ၍ အတွင်း၌ အနှစ် အသား ရှိသည်။ အစေ့ များသည် သီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မုန်း လများ တွင် သီးမှည့်သည်။
Useful Part : အသီး။
Including Compound : –
Usage : အာနိသင်
မြန်မာ ဆေးကျမ်းများ အလိုအရ သပြုသီး အစိမ်း သည် ဖန်၏၊ ချဉ်၏ ၊ အသီးမှည့် သည် ဖန်ချို ချဉ်သော အရသာ ရှိ၏။ လေ ၊ သလိပ် ရောဂါ၊ ရင်၌ ထိုးကျင် သော အနာ၊ မောပန်း ခြင်းနှင့် အပူပြင်း ထန်သော အဖျား များကို နိုင်သည်။
၁ ။ အသီးကို သကြားခဲ နှင့် ဖျော်ရည် ပြုလုပ်ပြီး သောက်ပါက ချောင်းဆိုး ရောဂါ နှင့် အပူလွန် ခြင်း အပြင်း ဖျား ခြင်း တို့ကို ပျောက်ကင်း စေ၍ ၀မ်းကို စင်ကြယ် စွာသွား စေ၏။
၂ ။ ခြေဖ၀ါး လက်ဖ၀ါး ပူလောင်သော အခါ အသီးရည်ကို လိမ်းပေးပြီး အရွက်နှင့် ပတ်ထား ပေးပါက ရက်အနည်းငယ် အတွင်း ပျောက်ကင်း စေသည်။
၃ ။ အသီးကို အရည်ညှစ် ၍ သောက်သုံး ခြင်း ဖြင့် ၀က်ရူး ရောဂါ၊ ခွေးရူး ရောဂါ များ ပျောက်၏။
ခုမှ မြင်ဖူးတော့တယ် .. ရှဲရှဲ